Iskudhacyo kasocda magaalada Jigjiga maantay – Ahmed A. Abdulahi
Iskudhacyo kasocda magaalada Jigjiga maantay
AhmedAbdiAbdulahi	Uncategorized	 January 29, 2019 January 29, 2019 1 Minute
By Ahmed Abdi abdulahi
Rabshado Iyo iskudhacyo ayaa galabnimadii maanta ilaa hada kasocda caasimda magaalada Jigjiga. Iskudhacyadan ayaa bilaabmay maanta galinkiidambe. Rabshadahan ayaa sida wararku igusoogaadhayaan udhexeeya qoomiyada soomaalida Iyo Qoomiyadaha kale ee axmaarada.
Waxuu iixaqiijiyay dad goobjoogayaal ahi inay indhohooda ku arkayeen Xabado Iyo Rasaas kasocotay magaalada Jigjiga dhexdeeda. Qof qarinaya Aqoonsigiisa ayaa sidan yidhi; ” waxaan Arkayay dad is eryanaya Iyo xabad dhawaaqeeda meelaha aan u dhawaa” hadaba Rabshadahan ayaa sal uh iskudhacyo ay samaynayeen dadka ajnabiga ah ee axmaadara Iyo soomaalida bilooyinkii ugudambeeyay
Waxyaalaha kusoobiira xaalada magaalada Jigjiga waan idinlasoowadaagi doonaa in shaa Allah.
Previous Post Abdirashiid Ali Shua’s trust; A “Broken glass”
Next Post Mustaqbalka Heshiiska Oromada Iyo Soomaalida.